Vaovao Martech Zone Logo ho an'ny 2019 | Martech Zone
Vaovao Martech Zone Logo ho an'ny 2019
Alahady 6 Janoary 2019 Alakamisy, May 7, 2020 Douglas Karr
Faritra iray izay tsy nampanjariako vola tamin'ny marika ity tranonkala ity. Raha ny ahy fahafahana misafidy nanana sary famantarana mahafinaritra tiako, ary miara-miasa amin'ny mpanjifanay rehetra amin'ny marika izy ireo, tsy nanana bandwidth fotsiny aho hiasa amin'ny Martech Zone marika… mandraka androany.
Ilay marika "M" taloha dia fanoharana somary novaina novidiko maimaika taorian'ny nanovako ilay sehatra. Tena tsotra izany, tsy misolo tena na inona na inona ary manelingelina ahy isaky ny mahita azy aho.
Ilay mpamorona niasa tamin'ny DK New Media Nahita ny logo fa niasa tamin'ny fomba tsy manam-paharoa sy mamorona ny masoivohonay mba hampitomboana ny vokatra ho an'ny mpanjifanay. Ny tandindona dia doka ankavia sy k miankavanana, saingy misy làlana tokana manohana zana-tsipika miakatra.
Izaho dia mpankafy manga hatrany noho ny sary famantarana ahy, mahafinaritra, mampitony ary manome toky. Noho izany, fa tsy manomboka amin'ny rangotra vaovao miaraka amin'ny sary famantarana vaovao Martech Zone, Nesoriko ary namboariko indray ny DK New Media famantarana. Ny fitoviana dia zava-dehibe satria te hanome marika ny maso ivoho sy ny bilaogy aho.
Mety tsy dia miharihary izany, saingy ny logo dia mampifangaro ny m, t, ary ny z… hanehoana ny tandindona martech ziray. Nahafinaritra ahy ny namolavola ohatra am-polony talohan'ny nitsambikimbikina tamin'ny mpanao sary ary nanangana azy. Mbola somary tsy mahazatra io, ka mino aho fa solontenan'ity bilaogy ity izy io.
Miaraka amin'ny sary famantarana, nohazavaiko sy novaoviko ilay lohahevitra martech.zone koa. Raha mamaky momba izany ao amin'ny taratasim-baovao izahay dia aza hadino ny manindry ary mijery. Nahenako ny habetsaky ny lahatsoratra, ny lohateny izay namboarina ary ny vatanao ho an'ny fanatsarana ny famakiana, ary na dia ny fikajiana loko ny sokajy aza (mety mila manavao azy ireo aho).
Iray amin'ireo tanjoko amin'ity taona ity ny fihainoana bebe kokoa anao ary hanombohana resadresaka aminao… hanovana ny mpihaino ho lasa vondrom-piarahamonina. Ka raisina an-tanan-droa ny fanehoan-kevitra. Ampahafantaro ahy izay tianao hianaranao bebe kokoa momba ny fomba hanatsarako ny tranokala sy podcast.
Tags: marikaDK New MediaLogo
Lesona fandraisana hafatra avy amin'ny manam-pahaizana amin'ny mailaka
WordPress: Ahoana ny fomba fampidinana sy fampidirana PDF